Our Services | Kar Kar Gyi
1. Helpfullness, Friendly and Skillfull Stuff.
(ဖော်ရွေ၍ အကူအညီရသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများထားရှိခြင်း။)
2. Can do Fastest and Accurate Delivery Service.
(တိကျ၍ မြန်ဆန်သော ပို့ဆောင်မှုစနစ်ရှိခြင်း။)
3. Can Provide wide range of each items.
(ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ရွေးချယ်စရာပစ္စည်းအမျိုးအစား အများအပြားထားရှိခြင်း။)
4. Can get Fair price with Best quality.
5. Free shipping over 1lark for downtown only.
(တစ်သိန်းနှင့်အထက်ဝယ်ယူပါက မြို့တွင်း(၁၇)မြို့နယ်သို့ အခမဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်း။)
6. Can get express delivery nationwide.
(ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့သို့ ပို့ဆောင်နိုင်ခြင်း။)
7. Can store enough stock in 5000sqft warehouse.
(မြို့နှင့်မဝေးလှသောတည်နေရာတွင် ၅၅၀၀ စတုရန်းပေရှိသော ကျယ်ဝန်းလှသောဂိုထောင်ရှိထားခြင်းကြောင့် ပစ္စည်းများကိုလုံလောက်စွာသိမ်းဆည်းသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီး လိုအပ်သောအခါ ပစ္စည်းအရေအတွက်အများအပြားလိုအပ်သော Customer များဆီသို့ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျစီမံထုတ်ပိုးပေး၍ သတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ အချိန်မှီပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း။)
8. Can provide OEM Logo and Packaging are available for bulk amount.
(အရေအတွက်များပြားသော orderများအတွက် နှစ်သက်ရာဆုတံဆိပ်၊ ထုတ်ပိုးမှုပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း။)
9. Can support Marketing Service for Shop, School, University, College and Organization.
(တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များ၊ ကျောင်းများ၊ အဖွဲ့စည်းများ၊ စတိုးဆိုင်များသို့ KKG Trading မှကျွမ်းကျင်သော Marketing Stuff များစေလွှတ်၍ လူကြီးမင်းတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်အကြံပြုပေးပြီး၊ budget များအားတွက်ချက်ပေးခြင်း။)
10. Serve excellent after sale support.
(၀ယ်ယူပြီး ပစ္စည်းများအတွက်ပါ After Sale Service ထားရှိပေးခြင်း။)
11. Can suggest revalant and proper product what you looking for.
(၀ယ်ယူသူဖောက်သည်၏ ရှာဖွေနေသောပစ္စည်းများနှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများအား ရွေးချယ်အကြံပြုပေးခြင်း။)
12. Can negotiate the price for bulk amount.
13. Can settle the payment with easy payment term (such as Online Banking and Wave Money).
(ငွေပေးချေမှုများအတွက် COD (Cash On Deliver)အပြင်၊ Mobile Banking, Wave Money ကဲ့သို့အစရှိသော Online ငွေချေစနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်ခြင်းကြောင့် Bank ပိတ်ချိန်များတွင်ပါ လွယ်ကူ၍ အချိန်ကုန်သက်သာစွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း။)